Kick-boxing Analamanga : lany ho filohan’ny ligy i Mino | NewsMada
Kick-boxing Analamanga : lany ho filohan’ny ligy i Mino
Par Taratra sur 24/01/2018
Tontosa, omaly tetsy amin’ny efitranon’ny ANS Ampefiloha, ny fifidianana izay ho filohan’ny ligin’Analamanga, taranja kick-boxing. Lany hitantana izany, mandritra ny efa-taona, Rakoto Razafiarison Mino Harifetra. Kandidà telo mirahalahy no niady izany toerana izany. Efatra ireo seksiona nandatsa-bato dia Antananarivo renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano ary Andrefan’Iarivo. Fihodinana voalohany ihany dia efa lany i Mino, izay nahazo vato 3 raha 1 kosa ny an’Andrianarivao Sitraka ary 0 ny an’Andrianantenaina Lucien Jean Romuald.
Laharam-pahamehana ho an’ny filoha vaovao, ny hametraka “dojo” rezionaly eo ambany “gradin” n’ny Mahamasina, hanaovan’ny atlen’Analamanga fanazarantena miaraka amin’ny fiatrehana ireo fifaninanana isan-tokony. Eo koa ny hangatahana amin’ny fanjakana, mba hanaovana ireo atleta mitondra avo ny lazan’i Madagasikara toy ny hoe : tompondaka eran-tany na tompondakan’i Afrika, ho mpiasam-panjakana ary fanovana ny andalana sasany ao amin’ny fitsipika anaty, mba hisian’ny firaisankina eo amin’ny samy atleta sy ny mpitantana. Eo koa ny fitondrana ny atletan’Analamanga, hiatrika ireo fihaonana iraisam-pirenena, saingy hiankina amin’ny federasiona izany. Hangatahin’Analamanga, hokarakarainy ihany koa ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina. Marihina, fa filoha lefitry ny ligy teo aloha ary nandimby an-dRakotoarisoa Gérard, filoha nitantana izany ligy izany, izay tsy nilatsaka intsony i Mino.
Nanatrika ity fivoriambe fifidianana ity ny solotenan’ny minisiteran’ny fanatanjahantena, izay nankatoa ny fahalanian’ny filoha vaovao, Rakoto Razafiarison Mino Harifetra. Tsiahivina, fa ity filoha vaovao ity, no hanangana ireo ekipa hiaraka aminy ka manana 2 herinandro izy, handrafetany izany.
Nangataka kosa Rasoanaivo Marcel, anisan’ireo nanangana ny kick-boxing teto Madagasikara, mba hahemotra ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona, izay tokony hatao ny talata 30 janoary, ho avy izao. Hiankina amin’ny minisiteran’ny fanatanjahantena nefa ny fanapahana izany.